Thola '404 - Ayitholakali' uma uzama ukulanda
Okubalulekile Thola '404 - Ayitholakali' uma uzama ukulanda
unyaka 1 8 edlule #932 by I-MTR1768
Ngazama ukulanda i-freeware ku:
Lapho ngifaka inkinobho yokulanda owazama ukufika lapha:
futhi ngithola 'i-404 - ayitholakali'.
Yini engingayenza ukuze ngilande?
unyaka 1 8 edlule #933 by DRCW
Iphutha le-404 lingase libe yizizathu eziningi. Ungase ube nenkinga nge-server yakho noma i-Rikooo kungenzeka ukuthi isebenza ku-yabo. Ungase ube nokuxhumana okulinganiselwe. Ungase ube ne-malware ehilelekile. Ngincoma ukusebenzisa ama-malwarebytes. Kuyinto yokukhishwa kwamahhala futhi uthole izinsuku ezingu-15 zesevisi egcwele yamahhala. Ngiye ngiyisebenzisa iminyaka engu-4, futhi akukho lutho olungena. Uma usuqede ukuskena, zama futhi ulandele indawo futhi.